Afaan Hamii Bare Utubaatti hasaasa ! – Welcome to bilisummaa
Afaan Hamii Bare Utubaatti hasaasa !
Namichi Guyyaa Bofa arge halkan
Gaaddidduu isaa dheesse!
Waan Dabruuf maqaa hin dabarre hin
Hin barihu Seetee Gorduubatti
Anatu Caalaan Ciinciraa haaduu afaan
Gubattee hin beektuu ibiddatti
Laftis bahii jette jaartiin faeda irraa
Jaartiin Bara Buttaa Duudde hoo
Luboo Jechaa hafti !
Akka Durii fi Harka xuriitti hin hafan !
Ani hoo duruu gubattuu dha jette
beddeen mana keessa gubattee !
Keessa namaa hin beektuu keessa
qabattee namaa kenniti !
Sangaan bara qote hedata !
Waan uffattu hin qabduu aguuggattee
Karaan Sobaan dabran galatti nama
Hantuuti haadha jalatti gumbii uraa
Namni dhukkubsataa manaa qabu
du’a gahii namaa hin oolu !
Hojiin Waaqayyoo fi kolfi saree hin
Haadhaa fi adurree hin dhaanan !
Warri guddaan aduurree wasaasaa
Adurreen keessi bineensa !
Maraatuu keessi gamna !
Waaqayyo beekee bofa miila
Waan Waaqni qocaaf kaa’e illeettiin
Foon lafa jiru allaattiin muka irraa wal
Waraabessii biyya namni isa hin
beekne dhaqee itillee naa hafaa
Manni of – jajjuu karaa dura
Bor hin bekneen qoda- bukeen ishee
Kan of jaju hin dogoggoru !
Haati mimmixaa kanuma kootu guba
Ija jabeessa irraa sirbi hin fokkisu !
Duulli amma oduu hin gahu !
Iyyaniif dhalcha hin ta’u jedhe
korbeessi hoolaa korbeessa re’eetiin !
Mana aanu malee mana aaru bira hin
Ollaa fi Waaqatti gadi bahu !
Ollaan bultee beeka akka itti bule
abbaatu beeka !
Itti qabataaf cidhi ollaa jira !
Garbittii lubbuuf fiigdu ollaan qophee
dha jedha !
Garbittiin gargaarsa argatte majii
bba hin qabdu akaakyuuf boochi
Abbaa iyyu malee ollaan namaa hin
Abbaan damma nyaateef ilma hafaan
Abbaatu of mara jedhe bofti hantuuta
Addaggeen hamma lafa irra ejjettu
nama irra ejjetti
Akka abalun sirbaan boquu nama
Akkuma cabannitti okkoluAkukkuun
yeroo argate dhakaa cabsa
Alanfadhuuti gara fira keetti garagalii
ama of komatu namni hin
komatuAmartiin namaa hin taane
quba namaa hin uriin
Ani hin hanbifne, ati hin
qalbifnearrabni lafee hin qabdu lafee
Bakka kufte osoo hin taane, bakka
Balaliitee balaliite allaattiin lafa hin
Bara dhibee bishaan muka namatti
Bara fuggisoo harreen gara mana,
sareen gara margaa
Beekaan namaa afaan cufata malee
hulaa hin cufatu
Biddeena nama quubsu eelee irratti
Billaachi otoo ofii hin uffatiin
Bishaan gu’a gahe nama hin nyaatiin,
namni du’a gahe si hin abaariin
Bishaan maaltu goosa jennaan waan
achi keessa jiru gaafadhu jedhe
Boru hin beekneen qad-bukoon ishee
Boftii fi raachi hanga ganni darbutti
wal faana jiraattu
Bulbuluma bulbuli hangan dhugu
Buna lubbuuf xaaxa’u warri naa tolii
Cabsituun tulluu amaaraatiin
Citaan tokko luqqaasaniif manni hin
Daddaftee na dhungateef dhirsa naa
hin taatu jette sanyoon
Dhirsi hamaan maaf hin nyaatiin
jedha niitii dhaan
Dhirsaa fi niitiin muka tokko irraa
Dugda hin dhungatan, hunda hin
Iyyuuf bakkeen naguma, dhiisuuf
laphee na guba
Dhuufuun waliin mari’atanii dhuufan
Diimina haaduun nyaatani,diimaa
Dinnichi bakka gobbitetti hordaa
Du’aan dhuufaa jennaan kan bokoke
Dubbii baha hin dhorkani galma
Dubbii jaarsaa ganama didanii galgala
Fagaatan malee mi’aa biyyaa hin
Farda kophaa fiiguu fi nama kophaa
himatu hin amaniin
Firri gara firaa jennaan kal’een gara
Foon lafa jira allaatti samii irraa wal
foon lakkayi jennaan rajijjin tokko
fokkisaan nama qabata malee nama
Fuula na tolchi beekumsi ollaa irraa
argamaa jette intalli
Gaangeen abbaan kee eenyu jennaan
eessumni koo farda jette
Gaangoonn haada kutte jennaan oftti
Gabaan fira dhaba malee
namadhabinsa hin iyyitu
Galaanni bakka bulu hin beekne
dhakaa gangalchee deema
Gaalli yoom bade jennaan, gaafa
morma dheeratu bade
Gamna gowomsuun jibba dabalachuu
Ganaman bahani waaqa jalaahin
Garaa dhiibuu irra miila dhiibuu
Garbittii lubbuuf walii gadi kaattu,
warri qophinaafi se’u
Jaalalli allaatti gara raqaatti nama
Gogaa duugduun yoo dadhabdu saree
Gola waaqayyoo itti nama hidhe lookoo
Gowwaa wajjin hin haasa’iin bakka
maleetti sitti odeessa, karaa jaldeesaa
hin hordofiin halayyaa nama geessa
Gowwaan ballessaa isaa irraa barat,
gamni balleessaa gowwaa irraa barata
Gowwaan bishaan keessa ijaajjee
Gowwaa fi bishaan gara itti jallisan
Haadha gabaabduu ijoolleen hiriyaa
Haadha yoo garaa beekan ilmoo jalaa
Halagaa ilkaan adii, halangaan isaa
Haati ballaa (suuloo) ya bakkalcha koo
Haa hafuun biyya abbaa ofiitti nama
Haati kee bareeddi jennaan, karaa
kana dhufti eegi jedhe
Hagu dhiba jette sareen foksoo
Hantuunni haadha jalatti adurree
Harka namaatiin ibidda qabaa hin
Harkaan Gudunfanii, Ilkaaniin Hiikkaa
Harree ganama badee, galgala kur-
kuriin hin argitu
Harree hin qabnu, waraabessa wajjin
wal hin lollu
Harreen nyaattu na nyaadhu malee
bishaan ol hin yaa’u jette
Harreen yoo alaaktu malee yoo
dhuuftu hin beektu
Hidda mukaa lolaan baaseetu, hidda
dubbii farshoo (jimaa)n baase
Hidhaa yoo tolcha, gadi garagalchanii
hin guddattuu jennaan baratu
Hiriyaa malee dhaqanii gaggeessaa
hiyyeessaf hin qalani kan qalame
Hoodhu jennaan diddeetu lafa
Hoolaan abbaa abdatte, diboo duuba
Hoolaan gaafa morma kutan samii
Ija laafettiin durbaa obboleessaf
Ijoollee bara quufaa munneen ibidda
Ijoollee hamtuun yoo nyaataaf waaman
ergaaf na waamu jettee diddi
Ijoolleen abaa ishee dabeessa hin
Ijoolleen quufne hin jett, garaatu na
dhukube jetti malee
Ijoolleen quufne hin jettu beerri
fayyaa bulle hin jettu
Ijoolleen niitii fuute gaafa quuftu
Ijoollee qananii fi farshoo qomocoraa
Ijoollee soressaa dhungachuun
Ilkaan waraabessaa lafee irratti
Ilmi akkoon guddiftu dudda duubaan
Intalli bareedduun koomee milaatiin
Ittiin bulinnaa sareen udaan namaa
Jaamaan boru ijji keen ni banamti
jennaan, edana akkamitin arka jedhe
Jaarsi dhukuba qofaa hin aaduu, waan
achisutu garaa jira
Jaarsii fi qalqalloon guutuu malee hin
Jaalalli jaldeessa yeroo fixeensaa garaa
jalatti, yeroo bokkaa dugda irratti
Kadhatanii galanii weddisaa hin
Kan abbaan gaafa cabse halagaan gatii
Previous Barbaric beating & rape of Ethiopians by Saudis..
Next Call for Demonstration at Saudi-Arabien Embassy in Germany,Concerning Human Right Violations against Oromos and Nation and Nationalities of Ethiopians in Saudi Arabia